Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: आइजिपी रवीन्द्रप्रताप शाहले भने भएका जति सबै शक्तिकेन्द्र धाउँदै हिँड्ने, अनि कसरी बन्छ संगठन,' 'संगठन आइजिपीको मात्र हो र ?'
आइजिपी रवीन्द्रप्रताप शाहले भने भएका जति सबै शक्तिकेन्द्र धाउँदै हिँड्ने, अनि कसरी बन्छ संगठन,' 'संगठन आइजिपीको मात्र हो र ?'
सरुवा/बढुवामा नेताको ढोका धाउने प्रवृत्ति, 'योभन्दा लाजमर्दो अवस्था अरू के हुन्छ?,' शाहले लाचारी व्यक्त गरे 'म हैरान भइसकेँ।'
पदोन्नति पाएका प्रहरी अधिकृतलाई फुली लगाइदिँदा 'शुभकामना' दिई हौसला बढाउने गरिन्छ। आइजिपी रवीन्द्रप्रताप शाहले भने आइतबार एसएसपीलाई फुली लगाइदिँदा उनीहरूको हौसला बढाउनुभन्दा कार्यशैलीप्रति नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै झाँको झारे। जति प्रयास गर्दा पनि प्रहरी संगठनको छवि सुधार्न नसकेकोमा खिन्नतासमेत उनले प्रकट गरेका थिए। स्रोतका अनुसार 'घुस' शब्द प्रयोग नगरी उनले अधिकांश प्रहरी अधिकृत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाए। 'मेरो पहिलो योजना संगठनको छविमा सुधार्नु थियो, तर जति गर्दा पनि सकिनँ,' शाहले भने। प्रधान कार्यालय नक्सालमा दिउँसो १२ बजे भएको कार्यक्रममा शाहले भने, 'संगठनका सदस्यहरू जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नेभन्दा 'अन्य प्रतिस्पर्धा'मै अल्भि्कँदा समस्या आएको छ।' अन्य प्रतिस्पर्धा के हो भनेर व्याख्या नगरे पनि शाहले यसपालिको बढुवा भएको चलखेलमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 'पाँचजनाको दरबन्दी खाली थियो, १० वटा थपेर १५ जनाको बढुवा गरियो,' शाहले भने, 'तैपनि सबैको चित्त बुझाउन सकिएको छैन, झन् धेरै गुनासो सुन्नुपरिरहेको छ।' प्रहरी स्रोतका अनुसार एसएसपी बढुवामा आइजिपी र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबीच मतभेद थियो। शाह दरबन्दी थप्ने पक्षमा नरहे पनि गच्छदारको सक्रियतामा एकैपटक १०
एसएसपी थपिएको थियो।
बलजफ्ती एसएसपीको दरबन्दी थपेर संगठनलाई 'भु"डे' आकारको बनाउनुहुन्न भन्ने आइजिपीको अडानले बढुवा केही महिना ढिला भएको थियो।
पा"च क्षेत्रीय तालिम केन्द्र, उपत्यकाका तीन जिल्ला र प्रधान कार्यालयमा २ वटा थपेर १० दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले दरबन्दी थप्ने गृहको प्रस्ताव अस्विकार गरे पनि गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर पारित गराएका थिए।
केही उम्मेदवारको लबिङमा दरबन्दी थपिनुलाई शाहले अनुशासनविपरीत ठानेका छन्।
'नियमसंगत बढुवाका लागि संगठन प्रमुखलाई सहयोग पुर्‍याउनेभन्दा पनि अप्ठ्यारोमा पार्न परिवारकै सदस्य सक्रिय भए,' शाहलाई उद्धृत गर्दै एक नवनियुक्त एसएसपीले भनेे, 'अब सरुवामा पनि उस्तै दबाब झेल्नुपर्ने होला।'
नवनियुक्तहरूलाई निर्देशन दि"दै शाहले गृहबाट बढुवाको पत्र आइसकेपछि पनि केही अधिकृत 'सिनियरिटी' तलमाथि पार्न दौडधुप गरेको खुलासा गरेका छन्।
'योभन्दा लाजमर्दो अवस्था अरू के हुन्छ?,' शाहले लाचारी व्यक्त गरे, 'म हैरान भइसकेँ।'
संगठनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेभन्दा जसरी पनि अनुकूल कार्यालय गएर स्वार्थसिद्ध गर्ने अस्वस्थ होडबाजी सुरु भएको ठहर शाहको छ।
प्रहरी अधिकृतहरू क्षमताअनुसारको काम गर्नेभन्दा पैसाको पछि लाग्ने गरेको आरोप शाहले लगाए। त्यो भनाइलाई अझ प्रस्ट पार्दै शाहले 'एसपी, एसएसपीहरू नै इन्सपेक्टरले हा"किरहेको कार्यालय जान तम्तयार रहने' अवस्था रहेको बताए।
'दरबारमार्ग र सोह्रखुट्टे प्रभागमा को जाने भनेर सोध्ने हो भने एसपी/एसएसपीले नै हात उठाउँछन्,' शाहले दिक्दारी व्यक्त गरे।
शाहले बढुवामा को अगाडि वा को पछाडि भयो भनेर कुरा काट्नुभन्दा आफ्नो कार्यशैली व्यावसायिक बनाउन सुझाव दिए। 'अहिले जसले उत्कृष्ट काम गर्छ, ऊ अगाडि पर्ने हो,' शाहले कार्यक्रममा भने।
शाहले प्रत्येक बढुवामा आफ्नो वरियताक्रम तलमाथि भएको दृष्टान्त दिए। 'म प्रहरी निरीक्षक हुँदा २ नम्बरमा थिएँ। डिएसपी हुँदा २४ नम्बरमा फालिएँ। एआइजीमा पहिलो नम्बरमा परेँ, तैपनि आइजिपी हुन पाइनँ,' उनले भने, 'तर, पछि परिस्थिति बदलियो। म आइजिपी भएँ। आफ्नो भाग्य र कर्ममा पनि विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। नम्बरको पछाडि दौडेर मात्र केही हुनेवाला छैन।'
शाहले भोगबहादुर थापा, यादवराज खनाल, सुबोध घिमिरे, रमेशप्रसाद खरेल, सर्वेन्द्र खनाल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, मिलन बस्नेत, पुष्कलराज रेग्मी, राजेन्द्र श्रेष्ठ, योगेश्वर रोमखामी मगर, उत्तमकुमार कार्की, सुभाषचन्द्र चौधरी, उत्तमबहादुर सिंह, गणेशबहादुर गुरुङ, छविलाल जोशी तथा प्राविधिक कृष्णप्रसाद गुरागाईंलाई फुली लगाइदिएका थिए।
आइजिपीले आफूले मात्र संगठन बलियो बनाउन खोजेर सफलता हात नलाग्ने बताएका छन्। 'भएका जति सबै शक्तिकेन्द्र धाउँदै हिँड्ने, अनि कसरी बन्छ संगठन,' उनले दुःख व्यक्त गरे, 'संगठन आइजिपीको मात्र हो र?'
संगठन बाहिरबाट आउने प्रेसर सबैले अस्विकार गरेमात्र साख जोगिने ठहर उनको छ। सरुवा/बढुवामा नेताको ढोका धाउने प्रवृत्ति छाड्न उनले सुझाव दिएका छन्।
'नेतासँग सम्बन्धै नराख्नुस् भनेको हैन। संगठनले अन्याय गरे जानुस्, गुनासो सुनाउन। तर, संगठनले हेर्दाहेर्दै जो नेताको दैलो धाउँछन्, त्यसले न उसको हित गर्छ, न संगठनको।'
Posted by www.Nepalmother.com at 7:30 PM